I-China 60MM / 2.4 Inch Magnetic Grinder Hexagon 4 Piece Zinc Alloy Spice Grinder Production and Factory | I-Hemgrinder
I-60MM / 2.4 Inch Magnetic Grinder Hexagon 4 Piece Zinc Alloy Spice Grinder
I-grinder entsha yensimbi yomklamo - Usayizi omncane osindayo wesisindo esine-hexagon 4 amakamelo wonke axhunywe ngozibuthe, akwenze kube lula ukufaka i-herb bese ukhipha imbiza ngaphandle.
Into No: GSRP2584
Umbala: Mpunga / Isiliva / I-Rose Gold
Khula Isisindo: 323g
Ubukhulu (D * H): I-2.36 x 2.48 inch (60 x 63mm)
Usayizi (ubukhulu x ukuphakama): I-2.36 x 2.48 inch (60 x 63mm)
• I-grinder entsha yensimbi yomklamo - A isayizi elincane elisindayo isisindo hexagon 4 amakamelo wonke axhunywe ngozibuthe, akwenze kube lula ukufaka imbiza ukhiphe umuthi ngaphandle.
• Lesi sigaxa seplatinamu sakhiwe kusuka kwensimbi eqinile futhi eqinile ye-zinc. Amaqabunga e-grinder ebukhali aqinisekisa ukuthi ukusonteka nokugaya okusebenzayo. Ukujula kwamazinyo abukhali kungu-0.39 '' ngakho-ke ungakwazi ukufaka imbiza ngaphezulu kanye futhi ngeke ichichime onqenqemeni.
• I-grinders ephelele ibumbekile yokugaya yonke imifino yamaqabunga akho omile. Umsebenzi osindayo kanye nomthamo omningi kwenza ukugoba komoya kube nomoya.
• I-grinders eyomile yemifino enamakamelo ama-4, kulula ukwahlukana ibe izicucu ezi-4 ngokushesha futhi njengoba kungekho okucwiyiwe kuzoba lula ukuzigcina ihlanzekile.
• I-LATGE CATCHER - Iza nesikrini se-mesh esithatha futhi sihlunge imbiza enhle kakhulu ekubambeni okukhulu.
• SEBENZELA IZIMBALI ZOKULULA KONKE - Hhayi njengamanye ama-grinders abamba inani elincane le-herb futhi ngakho-ke kukwenza ukuthi ugaye inani elincanyana amahlandla ahlukanisiwe, isigaxa sethu singu-2.36 "ububanzi ngamakamelo ajulileko aqukethe imbiza, okusho ukuthi uzokwazi gaya amakhambi amaningi ngasikhathi sinye.
• IMISEBENZI! I-premium grinder yethu ingusayizi ofanelekayo wezinjongo ezithandekayo nezasekhaya. Isisindo sihle futhi sisindayo, kodwa hhayi kakhulu ukuthi umthwalo umthwalo ukusithwala. ISIPHI ISIMEMO SAKHE! Uma ungazithengi wena okungenani uthenge eyodwa kubangani bakho njengesipho.
I-63MM / 2.5 ″ White 4 Piece Spice Grice Zin ...